Masuuliyiin hor leh oo ku biiray shirka ka socda Dhuusa Mareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Masuuliyiin hor leh oo ku biiray shirka ka socda Dhuusa Mareeb
Mareeg.com: Mas’uuliyiinta ugu sarreysa maamullada gobollada dhexe Soomaaliya ee Galmudug, Ahlusunna Waljamaaca iyo Ximan iyo Xeeb ayaa gaaray degmada Dhuuso-mareeb ee gobolka Galguduud, si ay uga qayb-galaan shirka dib u heshiisiinta ah ee ka socda degmadaas.
Xubnaha tagay Dhuuso-mareeb ayaa waxaa ka mid ah; madaxweynaha Gal-mudug, Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid), guddoomiyaha guud ee Ahluusnna, Ibraahim Xasan Guureeye iyo madaxweyne ku xigeenka Ximan iyo Xeeb, Cabdi Maxamed Suldaan.
Wafdiyadan ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmadaas, iyadoo uu ka hadlay soo dhaweyntooda, guddoomiyaha degmada Dhuuso-mareeb, C/raxmaan Cali (Geedo-Qorow) oo sheegay in cid walba oo nabad doonaysa ay ku marti-qaadayaan shirka ka socda Dhuuso-mareeb.
“Shirka ka socda Dhuuso-mareeb waa mid looga tashanayo aayaha gobollada dhexe ee Soomaaliya, kaasoo hordhac u ah shirweynaha dhismaha maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya,” ayuu hadalkiisa ku daray Geedo-Qorow.
Dhanka kale, mas’uuliyiinta Ahlusunna, Galmudug iyo Xirman iyo Xeeb ayaa si wadajir ah ugu baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan degmada Guriceel ee gobolka Galguduud, halkaasoo ay dhawaan ku dagaalameen ciidammo kala taabacsan Ahlusunna iyo dowladda Soomaaliya.
“Waxaan ku baaqaynaa in maskaxda iyo muruqa oo dhan la isugu geeyo sidii loo dhisi lahaa maamulka gobollada dhexe lana joojiyo colaadda Guriceel,” ayay si wadajir ah u yiraahdeen mas’uuliyiinta saddex maamul ee ka jira gobollada dhexe.
Shirkaas waxaa horay magaalada Dhuusamareeb uga furay madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh, waxaan la qorsheeyey inuu ku dhamaado inta ka dhiman bishaan Febaraayo, 1-da Maarsana Cadaado loo tago shirka maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud.